राममणि पोखरेलको भविष्यवाणी | मझेरी डट कम
२०७४ साल भाद्र २१ गते राममणि पोखरेलसँग पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानको वृहत साहित्यिक कार्यक्रममा दोस्रो पटक साक्षत्कार हुने मौका मिल्यो । सप्रेम उपहार सहित ‘भविष्यवाणी’ कथासङ्ग्रह मेरो हातमा पर्यो । राममणिको यस कृतिको पछिल्लो आवरण पृष्ठमा सम्झनाको पोखरीमा (स्मरण २०५८), जेल स्मरण खण्ड १ (स्मरण २०५९) साहिँली मैया र रसुवा घाट (२०६१,उपन्यास), हरिमानको आत्महत्या (२०६३, कथासङ्ग्रह) सोममाया र शान्ति अभियान (२०६५,कथासङ्ग्रह), दण्डहीनता (२०६५,कथासङ्ग्रह), सूचना टाँस (२०६६ कथासङ्ग्रह), समयका पाइला (२०६७, कथासङ्ग्रह), अमरमानको बहिर्गमन (२०७० कथासङ्ग्रह), यात्राका अनुभूति (२०७२, यात्रा), स्वदेशप्रेम (२०७३, कथासङ्ग्रह) समयले दिएका पीडा (कथासङ्ग्रह २०७३) छेदीलाल (२०७४, कथासङ्ग्रह), भूमिकामा राममणि पोखरेल (२०७४) र भविष्यवाणी (कथासङ्ग्रह २०७५) गरी १५ ओटा कृतिको विवरण पाइन्छ । यी पन्ध्रथान कृतिहरूमा १० थान कृतिहरू कथासङ्ग्रहका छन् । यी कथा कृतिहरूले उहाँलाई बरिष्ठ कथाकारको रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । उहाँ कथाकारमात्र नभई एउटा वरिष्ठ समाजसेवी पनि हुन्छ । समाज सेवामा समर्पित हुँदा जेलको यातना समेत भोग गरेको व्यक्तिको रूपमा उहाँको परिचय अगाडि आउँछ ।
कृतिको संरचना –आवरण पृष्ठ सहित १६४ पृष्ठमा संरचित यस कृतिको प्रकाशन शब्दार्थ प्रकाशनले गरेको छ । यस कृतिको मूल्य ३५६ रुपियाँ राखिएको छ र यसमा १६ कथाहरू समावेश गरिएका छन् ।
कृतिप्रति साहित्यकारको धारणा – यस कथाको भूमिका वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधानले लेख्नुभएको छ । भूमिकामा प्रमोदजीले शूक्ष्मरूपमा कथाले समाएका सम्पूर्ण घटना क्रमलाई समेटदै यस कृतिको चिरफार गर्दै लैख्नुहुन्छ –‘‘वास्तवमा कथासङ्ग्रहका कथाहरूले कथाकार पोखरेल पीडाका कथाकार हुन् भन्ने देखाउँछ ’’ । ‘भोगाइ र अनुभूतिले खारिएका कथाहरूको सङ्ग्र’ शीर्षकमा नारीस्रष्टा ज्ञानु अधिकारीले लेख्नुहुन्छ–‘‘यसरी समग्रमा हेर्दा प्रस्तुत सङ्ग्रहका कथाले नेपाली कथा साहित्यको सामाजिक यथार्थवादी धारालाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । कथाकार राममणि पोखरेलले आफ्ना कथाले समेटेको क्षेत्रलाई यसरी प्रष्ट्याएका छन् –‘मेराकथामा शहरीय सम्भ्रान्तहरूको जीवनको गन्ध छैन । देशको कुनाकाप्चामा बस्ने गरिब र उपेक्षित व्यक्तिहरूका जीवनका भोगाइहरू छन् । ’
कथाभित्र प्रवेश गर्दा –यस कथासङ्ग्रहमा १६ कथाहरू मावेश गरिएका छन् । यी कथालाई समग्रमा दूई किसिमले अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रथम कुरा नामबाट शीर्षक दिएर लेखिएका कथाहरू जस्तै भँगेरी दिदी, बोडे कान्छा, गोमा दिदी, हमालसर, जानुका भाउजू, झुलीको पुनरागमन, कस्तुरी मैयाँ, माननीयज्यू र पेरुङ्गे जेठो । दोस्रोमा विविध घटनाक्रम (,विकृति र विसङ्गति, संस्कार)लाई शीर्षक दिएर लेखिएका कविताहरूमा आफ्नै बाटो, असहज बाटो, विश्वासमा सङ्कट, चिहानको किलो, धैर्य, जीवन र दाइजो र सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ ।
आफ्नै बाटो– यस कथामा चुमन सदा फेकन सदा, किसुन सदा र यिनका श्रीमती, भट्टीवाली र पुलिस पात्रहरू बीचका घटना क्रमलाई लिएर सुन्दर प्रस्तुति गरिएको कथा हो । चुमन सदा फेकन सदा, किसुन सदा श्रमिक हुन् । चुमनले माटो काट्ने काममा गाडधन प्राप्त गर्छ, फेकनले काठ जङ्गलका दाउरा काठ गाडीमा लादेर र उतारेर राम्रो ज्याला प्राप्त गर्छ र किसुनले काठ चिरेर राम्रो ज्याला प्राप्त गर्दछ । यिनीहरू भट्टीमा पुग्छन् र रक्सी खाएर मात्न थाल्छन् । भट्टीवाल्नीले भट्टीबाट निकाली दिन्छे । बाटोमा असहज अवस्थामा भेटेपछि पुलिसले समातेर लान्छ । यस कथाले मुसहर जातिको खर्चिलो बानीले गर्दा कमाएर पनि गरिबी अवस्थामा रहनु पर्ने यथार्थता, मुसहर महिलाको पतिमुखी भएर रहने काम, पुलिसको दायित्व र भट्टटीवालीको भट्टी सञ्चालन कौशलतालाई मीठो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
असहज बाटो –यस कथामा चन्द्रलाल एक परिश्रमी कृषक, खिने साहिली, चन्द्र लालका तीनभाइ छोराहरू (जेठो मानवीर बाबुसँग अलग बसेको, माहिलो जङ्गमान विदेश, कान्छो टङ्कराज) र दुई छोरी –दीपा र ..), मेघनाथ, पुष्पराज गङ्गामाया, पिउन डाक्टर, प्रभाकर, यस कथाका सकृय र पेटबोलीमा आएका पात्र हुन् । टङ्कराजको विवाह गङ्गामायासँग हुन्छ । चन्द्रलाल तरकारी बारीमा पानी राख्न ल्याउँदा लोट्छन् र रात ११ बजे मृत्यु हुन्छ । मुश्लिम देशमा पत्नी सुत्केरी हुँदा बिदा दिने तर आमा बाबा मर्दा बिदा नपाउने हुँदा माहिलो छोरा दाहसंस्कारमा सहभागी हुन सकेन । गङ्गामाया काजु भए पनि मुखकी छुरा भएकोले ससुरो बितेको तीन महिनापछि सासूसँग तीब्र मतभेद भयो । गङ्गामायाले सासूलाई साह्रै मानसिक पीडा दिन थालिन् तर टङ्कराजले केही बोल्न सकेन बरू विदेश जान तयार भयो । बुहारीको बुहार्तन सहन नसकेर एक विहान खिनमायाले आफ्नो घर त्यागेर हिडिन्, उनी हिडेको गाउँमा चर्चा भयो तर छोराले उनलाई खोजेनन् । कथा मार्मिक छ । कथा नितान्त गाउँले परिवेशमा लेखिएको छ । कथाले नेपाली समाजमा देखिने सासू र बुहारी बीचको विवाद, ग्रामिण भेगलाई सरकारले गरेको उपेक्षा, बिमारी हुँदा दवाई नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अकाल मृत्यु आदि यथार्थ घटनाक्रमलाई समाएको छ कथाले । बाबु आमाप्रति आजका छोराबुहारीले गर्ने गरेको उपेक्षित व्यवहारको प्रतिनिधि कथा हो यो ।
विश्वासमा सङ्कट–विश्वासमा सङ्कट आजको विश्वमा देखिएको विश्वासघातलाई यसस कथाले प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस कथामा जोडिएका पात्रहरूमा योगेन्द्र (सानो पदको कर्मचारी), बिसमलाल (योगेन्द्रकी श्रीमतकिो मामा, क्याम्पसको शिक्षकको साथै वकिलको काम गर्ने मानिस), मसली (योगेन्द्रकी श्रीमती) यस कथाका सक्रिय पात्र हुन् । योगेन्द्रले बिसमलाललाई निकै विश्वास गर्दथ्यो र सुरक्षित र संरक्षित हुनको लागि बिसमलालकोमा डेरा सर्यो । एक दिन बलात्कारको केशमा सर्जिमन गर्न गएको वेला बिसमलालले राती मसलीलाई बलात्कार गर्दछ । यो घटनालाई मसलीले योगेन्द्रलाई भन्दछिन् दुवै डेरासर्ने चिन्ताले पिरोलिएर रातभरि निदाउन सक्दैनन् । यस कथाले आजको संसारमा देखिएको मानवीय कुप्रवृत्तिलाई उठाएको छ । कथाले मोटो शरीर, गोरो अनुहार, पढेलेखेको भएर मात्र मानिस भलाद्मी हुँदैन भलाद्मी हुनलाई मानिसको नियत व्यवहार सज्जनतामा उच्च हुनुपर्दछ भन्दे सन्देश पनि बोकेको छ ।
चिहानको किलो–यस कथामा नरनाथ, टीकादत्त, पुण्यकला, अन्तरे बुढा, हरिप्रसाद, नरबहादुर, भागवतप्रसाद, रणबहादुर, आदि यस कथामा आएका सकृय एव म पेटबोलीका पात्र हुन् । टीकादत्तका छोरा नरनाथ १८ वर्षको उमेरमा वृन्द्रावनमा गएर ५ वर्ष पढेर नेपाल फर्केका थिए । गाउँमा अन्तरे बुढाको मृत्यु भयो । उनको दाहसंस्कार कोशी नदीमा गरेर मलामी फर्कदा, बाटोमा रातको समय भएकोले चिहानमा कसैले किलो ढोक्छ भने ५०० रुपियाँ दिने सर्त राखियो । नरनाथ पढेलेखेको मानिस भएकोले आँट गरेर चिहानमा गयो । चिहानमा पुगेपछि उसको मन डरायो र चिहानमा नभएर केही दूरीमा किलो गाडो, किलो गाडदा किलो उसको दौरामा किलो गाडीएको हुँदा ऊ उठ्न सकेन र झनै डरायो र चिहानको चारहात दूरीमा ऊ डरले पछारियो । ऊ फर्कन अबेर गरेकोले मलामी गएर उसलाई उठाएर घरमा ल्याइयो तर भोलिपल्ट ऊ वेहोसी अवस्थामा नै उसले यस संसारबाट बिदा लियो । यस कथाले धेरै सन्देश दिएको छ । तत्कालीन अवस्थाको शिक्षाको अभाव, भूतप्रेतप्रतिको अन्धविश्वास, लामाधामी, ज्योतिषीबाट गरिने औषधीउपचार, आदि आदि । यस कथाको महत्वपूर्ण सन्देश भनेका यस प्रकार छन् । कुनै पनि काम गर्दा के काम गर्न हिँडेको हो, त्यसकाम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ र काम सुसम्पन्न गर्न सकिन्छ । अन्यथा त्यो काम गर्न सकिदैन । यसै कामबाट मृत्युवरण हुनसक्छ । यहाँ नरनाथलाई चिहानको मसानले नभै मनको मसानले चितामा पुर्यायो । धैर्य– म भन्ने पात्र, हिममाया, सन्तमान परियार, जुठे,गोरे, हिममायाको अङ्कल, झुमकी, नरध्वज आदि छलफलमा सहभागी गाउँलेहरू,यस कथाका सक्रिय र पेटबोलीका पात्रहरू हुन् । कथासार हिममायाका दुईभाइ छोरा जुठे र गोरे थिए । जुठे विदेश गएको थियो र गोरे घरमै थियो जुठेले पठाएका पैसा लिन झुमकी र गोरे जानेक्रममा दुवैको यौन सम्पर्क हुन्छ । सम्पर्कमा गर्भ रहन्छ । समाज जुट्छ समाजमा छलफल हुँदा गोरेले भन्छ – जन्मेको सन्तान घरकै परिवारको हुने छ, भाउजू भाउजूको ठाउँमा बस्ने, गोरेले आमा पालेर बस्ने प्रथम कुरा, दोस्रोमा जुठेले आमालाई पाल्ने र झुम्कीलाई गोरेले लिएर बस्ने र तेस्रो कुरा डाक्टरसँग गएर पेट सफा गर्ने समस्या समाधानका कुरा सभामा आउँछन् । गोरेले माफी माग्छ । झुमीले धैर्य गर्न नसकेर घटना घटेको धारणा बताउँदै कथा समाप्त हुन्छ । यो कथाले आज वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको घरमा घट्ने गरेका घटनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । गरिबी र पहाडमा हुने प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पहाडबाट मधेस झर्नु पर्नेको साथै कसैलाई पनि इन्द्रीय भोगबाट अलग गर्न सकिदो रहेनछ भन्ने सन्देश बोकेको छ ।
जीवन र दाइजो – गोरी, रमण, परिचारिका, डाक्टर,बिमारी र बिरामी कुर्ने मानिस, उमा, पाञ्चाली, श्यामा, रमणकी भाञ्जी, प्रमेश, प्रमेशकी दिदी र आमा (हेमा) आदि यस कथाका सकृय र पेटबोलीका पात्रहरू हुन् । कथासार – रमणकी श्रमिति गोरी बिमारी पर्छे र अस्पताल लगिन्छ । यस अवसरमा श्यामा भन्ने मधेसी महिला बिमारी भएर अस्पतालमा ल्याइएको हुन्छ । श्यामाकी सासू र नन्द कुरुवामा बसेका हुन्छन् । उनीहरूले श्यामालाई दवाइ पानी खानपीन नदिइ अस्पतालमा नै मार्ने राखेको नियत देखेर रमणले श्यामाकी सासूलाई राम्रो रेखदेख गर्ने सुझाव दिन्छ तर श्यामाकी सासू र नन्द अस्पतालबाट भाग्दछन् । रमणले श्यामालाई औषधी ल्याउनेर खाना खुवाउने काम गर्छ । यसै क्रममा प्रमेशले आफ्नी आमालाई (हेमाललाई) झाडापखलाको कारणले गर्दा अस्पताल लिएर आयो । प्रमेशलाई रमणले श्यामाको यथार्थलाई बताउँछ र सहयोग गर्ने धारणा राख्छ । श्यामाले आफ्नो साथमा भएको पैसा प्रमेशलाई दिन्दै औषधी उपचार गर्ने आग्रह गर्छे । उपचार हुन्छ । उपचारपछि प्रमेशले श्यामालाई हस्पिटलबाट गाडीमा लानको लागि कपडा बटुल्छ । श्यामाले गाडीमा कुरी राखेकी थिई भन्दै कथा समाप्त हुन्छ । कथाले दाइजोको समस्यालाई राम्रोसँग प्रष्ट्याएको छ । यो नेपालको तराई भेगको जल्दोबल्दो समस्या हो । दाइजोले सन्तुष्ट नभएमा बधुलाई विविध प्रकारले मारिदिने घटनाहरू सुन्न पाइन्छ । यहाँ पनि श्यामालाई विष सेवन गराएर मार्ने प्रयास गरिएको छ । यो दाइजो पीडित महिलाको एक ज्वलन्त उदाहरणको प्रतिनिधि कथा हो ।
सम्बन्ध– विद्यापति, उमेश उमेशकी पत्नी सरिता, आमा (सुमित्रा), दाजु होमनाथ होमनाथकी पत्नी मेनका, छविलाल माष्टर, मुरारी (उमेशलाई पैसा दिने मानिस), फणिन्द्र ( उमेशको फुफाजू) आदि यस कथाका पात्र हुन् । कथासार– विद्यापतिका दुईभाइ छोरा र पाँच बहिनी छोरीहरू थिए । विद्यापति र उनकी पत्नी (सुमित्रा) कान्छो छोरा उमेशसँग बसेका थिए । विद्यापतिको मृत्यु हुन्छ । उमेशले बाबुको वार्षिक कार्यक्रम सुसम्पन्न गर्छ । दाजु होमनाथको आर्थिक स्थिति राम्रो थियो । होमनाथकी पत्नी मेनका कटुवचन बोल्ने स्वभावकी नारी थिइन् । उनले जहिले पनि अंशबण्डामा ठगेको आरोप लगाउँथिन् । उमेशकी आमा सुमित्राले आफू बसेको छोराको दयनीय अवस्थालाई नहेरी छोरीहरूलाई माइत आएको बेलामा सकेसम्म राम्रो कोशेली लत्ताकपडा आदिे सन्तुष्ट बनाएर पठाउन चाहन्थिन् । दिदीहरू पनि भाइको दयनीय अवस्थालाई कहिल्यै हेर्न चाहेनन् । सरिता विमारी पर्दा उमेशले दाजुबाट ऋण पाउन सकेन र मुरारीबाट ऋण लिएर उपचार गरायो । एक दिन फणिन्द्र दुवै भाइलाई सुमधुर समन्ध बनाउन उमेशको घरमा गएर, उमेशले पनि सुमधुर सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्थ्यो । तर होम नाथ र उसको परिवारमा उमेशसँग सुमधुर सम्बन्ध होस् भन्ने कतै दिमागको कुनामा पनि थिएन भन्दै कथा समाप्त हुन्छ । यस कथाले अंशबण्डामा देखिने दाजुभाइ बीचको कटुताको एउटा प्रतिनिधि कथा हो । छोरीहरूको माइतीबाट धुत्ने प्रवृत्तिको नमुना हो यो । सुमधुर सम्बन्ध एक तर्फी नभै दोहोरो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ कथाले ।
भँगेरी दिदी– आठकठ्ठेमा ९४ वर्षकी भँगेरी दिदीको बसोबास भएको, उनका छोरा छोरी अपाङ्ग जन्मेपछि पतिले दोस्रो विवाह गर्नु, यहाँ यही समयमा मधेस आन्दोलन हुनु, मधेस आन्दोलनको पीडाले गर्दा छोराले जग्गा बेचेर जान खोज्नु आमाले नदिएकाले भँगेरी दिदीलाई कान्छ छोराले घरबाट निकाली दिनु, कान्छो छोराकै घरमा कोठा निकालेर बस्नु,छोरो मधेस आन्दोलनको कारणले बौलाउनु, पति वेपत्ता हुनु, एउटी छोरी भए पनि छोरीको माया नपाउनु, सौताका छोराछोरीले राम्रो प्रगति गर्नु आदि दिदीभाइ बीच भएको वार्तालापमा प्रष्टिएको एउटा दर्दनाक कथा हो । मानव समाजमा दर्शिने घरयासी घटनाक्रमलाई यस कथाले समाएको छ । मधेसी र पहाडी बीचको विभेदलाई उठाएको छ । गरिबी, दोस्रो विवाह गर्ने चलन, लामो आयुहुनेहरूको कष्टदाइ पीडालाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ । यस कथामा पेटबोलीमा थुप्रै पात्रहरू समावेश गरिए पनि सक्रिय पात्रमा भँगेरी दिदी र भाइ देखिन्छन् ।
बोडे कान्छा– गहते गाउँमा लालबहादुर नामको व्यक्तिका दुई छोरी र एक छोरा थिए । जेठी छोरीको विवाह गर्नको लागि लाला बहादुरले नयनध्वजसँग ३० रुपियाँ कर्जा लिएको थियो । तीर्थको लागि लालबहादुर हलेसी गएको र फर्कदा सुनकोशीमा डुँगा पल्टिदाँ उसको मृत्च्यु भयो । उसको मृत्यु भएपछि बाबुले लिएको ऋृण मार्फत बोडे कान्छा नयनध्वजको घरमा काम गर्न जानु पर्यो र ऊ गएर काम गर्न थाल्यो । नयनध्वजका छोरा विष्णुलाल र प्रेमसिंहलाई तेलमालिस समेत बोडेले गर्न पर्थ्यो । विष्णुलाल र प्रेमसिंहले त्यसै घरमा काम गर्ने गुथी नामकी नोकर्नीलाई ओछ्यान बनाएका थिए र गुथीले गर्भ धारणा गरिसकेकी थिई । गुथीले बोडे कान्छालाई लिएर भाग्ने योजना बनाई र एक रात विहानी पख दुवै जना यस घरबाट बाहिरिए भन्दै कथा समाप्त हुन्छ । यस कथाले राणाकालीन समयका धनी सामन्तले गरिबहरू माथि गरिएको शोषणलाई समाएको छ । वर्तमान परिपेक्षमा यो कथा ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न पुगेको छ ।
गोमा दिदी–यस कथामा पनि गोमा दिदीको कारुणिक व्यथा छ । उनको विवाह टङ्कनाथसँग भएको थियो । विवाहको महिना दिनपछि उनका पति विदेश गएका थिए । उनी ६० वर्षसम्म फर्केनन् । उनले कुनै सन्तान जन्माउने अवसर नै पाइनन् । उमेर छन्देर ठूली आमा भएर सेवा पुर्याइन् तर बृद्धपाले ढाकेपछि निकै लान्छना लगाएर उनलाई उनका दाजुहरूले उमेरमा काम लिए तर बृद्धा अवस्थामा घरबबाट निकालिएर अपहेलित भएकी हुन्छिन् । उनी असाहाय अवस्थामा पुग्दछिन् । यस कथाले समाजमा छोराछोरी र पति नभएका बृद्धा महिलाको कारुणिक व्यथालाई समाएको छ । यस कथाले समसामयिक अवस्थामा पनि यस किसिमका घटनाहरू समाजमा भएकालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
हमाल सर–कुवेर नाथले गाजली मैयाको रूपमा आकर्षित भएर जेठी श्रीमती छोरा छोरी हुँदा हुँदै पनि भित्र्याउँछन् । गाजली मैया घरमा भित्रिएको तीन महिनामा गर्भवती हुन्छिन् । सौता गर्भवती भए पछि सावित्री (कुवेर नाथकी जेठी श्रीमती)ले विभिन्न बहाना बनाएर उनलाई मार्ने षडयन्त्र गर्दछिन् । कुवेर नाथले घर समाल्न नसकी विदेशिन्छन् । सावित्रीले गाजली मैयाँलाई धेरै यातना दिदै, ३० रुपियाँ दिएर गोरे र गणेशलाई मार्न पठाउँछिन् । तर गाजली मैयाको अनुरोधमा यिनीहरूले नमारी कुमाल टारमा लगेर छाडिदिन्छन् । गाजली मैयाँले माइतीमा गएर हमाल सरलाई जन्माउँछिन् । गाजली मैया २००१ सालमा गाउँले तीर्थालुसँग जनकपुर जान्छिन् । त्यहाँ एकजना सिरीलाला नामक गुरुङ केटासँग भेट हुन्छ । उसले बच्चालाई समेत संरक्षण गर्ने, पढाउने भनेर गाजली मैयालाई बरेलीतिर लिएर जान्छ । हमाल सरले बरेलीमै अध्ययन गर्दछन् । २० वर्षको उमेरमा मामा गएर हमाल सरलाई गाउँमा लिएर आउँछन् । मामा र नन्दलालले हमाल सरलाई कुवेर नाथबाट अंश दिलाउँछन् र हमाल सरले गाउँमै शिक्षकको जागिर खान्छन् तर शैक्षिक प्रमाण पत्रमा बाबुको नाम सिरिलाल भएको र नागरिकतामा बाबुको नाम कुवेरनाथ भएकोले जागिर स्थायी हुन नसकी ६० वर्षसम्म विभिन्न विद्यालयमा अस्थायीमै रहनु परेको विवरण कथामा आएको छ । हमाल सरका तीन छोरा एक छोरीमा जेठो बाबुसँग अलग भै काठमाडौ गएर बसेको, माहिलो विवाह गरेर, एक छोरा र श्रीमती छाडी गाउँले केटीलाई लिएर बसेको तर त्यस केटीले पनि छाडिदिएर हाल कता छ थाहा नभएको र कान्छो छोरा विदेश गएको ३ वर्ष भएको, बुहारी माइत बसेकी,र हाल हमाल सर उनकी श्रीमती झमक मायाले घरयासी काममा जीवन बिताएको धारणा आएको छ कथामा । यस कथाले धेरै कुराहरू उठाएको छ । दोस्रो विवाह गरेपछि परिवारलाई व्यवस्थित गरेर मिलाएर राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश, सौताले सौतालाई मार्नेसम्म षडयन्त्र गर्छन् भन्ने सन्देश, बच्चासँगकी असाहाय महिलालाई कसैले ग्रहण गर्छ भने, बच्चाको संरक्षकत्व पनि ग्रहण गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश, एक सामन्तलाई अर्को सामन्तले ठिक पार्छ भन्ने सन्देश, आजका छोरा बुहारीले बाबु आमाप्रतिको दायित्वलाई भुल्दै गएको सन्देश छ ।
जानुका भाउजू–यस कथाको कथासारमा तीन छोराकी आमा जानूका भाउजू सहरको एउटा कुनामा बसेकी, अमाजू पालेकीसँग म भन्ने पात्रको भेट हुन्छ । जानुका भाउजूको पति ५० वर्षको उमेरमा बितेका हुन्छन् । माहिलो छोरा पनि बाबु बितेको दोस्रो वर्ष बितेको, जेठो घर छाडेको पाँच वर्ष भएको र कान्छोले पनि घर छाडेको तीन वर्ष भएको, अमाजुको पनि घरमा असहज परिस्थिति भएकोले दुईटीसँगै बसेका । देवर भाउजूको भेट बजारमा भए पछि भाउजूको अनुरोधमा देवर भाउजूको घरमा जान्छन्, दुख सुखका धारणा आउँछन् रात निकै बितेपछि जानुका भाउजू भन्छि– अन्न पानीको भोक, ज्ञानको भोक,र यौनको भोक गरी तीन थरीका भोक हुन्छन् । यौनको भोक एउटा निश्चित उमेरबाट प्रारम्भ हुन्छ रउक निश्चित उमेरको हदसम्म रहन्छ भन्दै उफ्रेर विस्तरामा पुग्छिन् । जानुका... जानुका... जानुका... भन्दै कथा कथा समाप्त हुन्छ । यस कथामा पनि विधवाले भोग्न परेका समस्यालाई समाको छ र यौन भाँेँगको महत्वलाई दर्शाएको छ ।
झुलीको पुनरागमन–झुलीको श्रीमान चन्द्रदेव विदेश गएको थियो । विदेशको भूमि टेकेको ४२ दिनमा विदेशमै मृत्युवरण गर्यो । उसको लास नेपाल आयो र बाग्मतीमा दाहसंस्कार गरियो । पति बितेको वर्ष दिनमा झुली लीलामाया, प्रेम कुमारी, दुई छोरी र एक छोरा वसन्तलाई छाडेर रविन्द्रसँग पोइल जान्छिन् । रविन्द्रले आफ्नी स्वर्गीय पत्नीको प्रशंसा गर्दै भुलीलाई यातना दिने गर्दा झुली त्यो घरमा बस्न नसकी पुन पुरानै घरमा फर्किन्छिन् । देवर सागर र देउरानी पद्माले पनि राम्रो व्यवहार गरेछन् । झुलीले घरकालाई आफ्नो व्यथा प्रष्ट्याउँछिन् र शरणको याचना गर्दछिन् । कथामा झुलीकी फुपूले आफ्नो भतिजोसँग पोइल लगाएर झुलीको घर र छोराछोरीसँग अलग्याएको धारणा आएको छ कथामा । यस कथाले सन्तानप्रतिको मायाभन्दा यौवन सुखलाई महत्व दिएको देखिन्छ तर त्यो यौवनसुख उपभोग गर्न नपाई दुख पाएर पुरानै घरमा फर्केको घटनालाई समाएको छ ।
, कस्तुरी मैयाँ– कस्तुरी मैयाँ प्रवेशिका पास गर्नेमा गाउँमै तेस्री महिला, निकै परिश्रमी, घरको काममा बाबु आमालाई सघाउने, मानव अधिकारवादी संस्थामा काम गर्नेले गाउँको उद्योगमा विज्ञापन खोलेकोले, जागिरको लागि दरखास्त दिन जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले एक रात बसेर हाकिमसँग परिचय गरेमा जागिर खान सजिलो हुने भनी त्यो रात उद्योगमै राखेर दुई जनाले बलत्कार गर्दछन् । जागिर दिने प्रलोभनमा पारी यौनशोषण गरिएको छ ।
माननीयज्यू – यस कथामा लेखनदासको कार्यकक्षमा आफ्ना दुई श्रीमती सहित लोचन पुग्दछन् । ३ विघा जग्गा तीन जनाको नाममा अंशवण्डाको लागि कागज लेख्न लेखनदासलाई भनिन्छ । कागज लेख्न अवेर भएकोले पास हुन सक्दैन र भोलि पल्ट बोलाइन्छ । जेठी श्रीमतीलाई विभेद गरेको देखेर लेखनदासले श्रीमान र सौता आउनुभन्दा जेठी श्रीमतीलाई भोलि पल्ट चाँडै आउने सङ्केत गर्द छन् र भोलि पल्ट जेठी श्रीमती लौकीमाया, उनकी बुहारी नातिनी र जुवाइँ चाँडैनै लेखनदासको अफिसमा जम्मा हुन्छन् लोचन र कान्छी श्रीमती मङ्गला अवेर गरेर पुगेर पास गर्नेभन्दा लौकीमायाले काठमाडौको घर नपाए अंशवण्डा नहुने भनेर कागज चेतिदिन्छिन् । लोचन र मङ्गलाले तिम्रो चित्त बुझाउँला भन्न सक्दैनन् । यस कथाले पहिला विवाह गर्ने र पछि उपल्लो पद या ओहोदामा पुगेपछि दोस्रो विवाह गर्नेहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ । दोस्रो विवाह गरेपछि पहिली पत्नी र उसका छोराछोरीप्रति आफ्नो दायित्व भुलेर रेखदेख र अंशवण्डामा विभेद गर्ने यथार्थतालाई प्रष्ट्याएको छ कथाले ।
पेरुङ्गे जेठो – श्रीनेत ठकुरी र पेरुङ्गे जेठोको लाहानमा भेट हुन्छ । दुवै बसमा एउटै सिटमा बस्न पुग्छन् र एक अर्काको परिचय माग्दछन् । श्रीतेन ठकुरीले आफ्नो थर सहजै भने पनि पेरुङ्गे जेठाले भने आफ्नो थर भन्न निकै कठिन मान्छ र आखिर पहिलेको दाहाल र हाल वि.क दाहाल भन्छ । उसले वि.क. दाहाल हुनुको कारणमा भेडाबाख्रा चराउँदा सनसे कामीकी छोरी नेपीसँग उसको प्रेम हुन्छ र नेपीले गर्भ धारणा गर्छे । उसलाई गाउँबाट निकालिएको हुँदा इटहरीदेखि उत्तरको गाउँमा आएर बसेको हुन्छ । हाल नेपीको मृत्युवरण भैसकेको हुन्छ र बुहारीले राम्रोसँग देखभाल गरेको बताउँछ । बहुदल आएपछि भाइका छोरा आउने जाने गरेको धारणा राख्दै बसबाट ओर्लिन्छ । यस कथाले जातीय विभेदको बारेमा धारणा राखेको छ । बहुदल आएपछि जातीय विभेदमा केही होलो भए पनि जातीय विभेदको अन्त्य भएको भने पाइँदैन ।
परिवेश– रमामणि पोखरेलले आफ्नै धारणामा लेखेका छन् –‘मेराकथामा शहरीय सम्भ्रान्तहरूको जीवनको गन्ध छैन । देशको कुनाकाप्चामा बस्ने गरिब र उपेक्षित व्यक्तिहरूका जीवनका भोगाइहरू छन् । ’ उनको भनाई अनुसार उनका कथाहरू ग्रामिण परिवेशमा लेखिएका छन् । स्थानको हिसावले हेर्दा पनि उनका कथा कोशीक्षेत्र वरिपरिका भित्रीमधेश, तराई पहाडलाई परिवेश बनाएर लेखेको पाइन्छ । यी कथाले राणकालीनदेखि वर्तमान अवस्थासम्मका ग्रामिण समाजका आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक परिवेशमा घटेका घटनाक्रमलाई समाएका छन् ।
पात्र चयन– कथामा सहभागी पात्रहरूको चयनले कथालाई रसिलो, भरिलो र दरविलो बनाउँछ । उनका कथाहरू चरित्र केन्द्रित देखिन्छन् । ग्रामिण परिवेशलाई महत्व दिएकोले पनि उनका कथाका पात्रहरू सबै ग्रामिण परिवेशमा उभिएका छन् । सामन्तदेखि गरिब कथाका पात्रहरू यस कथासङ्ग्रहका पात्रहरू हुन् । केही कथामा प्रथम पुरुष कथाको पात्रको रूपमा देखिन्छन् । सकृय पात्र र पेटबोलीका पात्रहरू गरी दुई किसिमका पात्रहरू यस कथामा समावेश गरिएका छन् ।
भाषाशैली –राममणि पोखरेलले सरल भाषामा, मिठास पूर्ण शैलीमा, ग्रामिण बोलीचालीमा, झर्रा शब्दलाई रोजेर, यथार्थ घटनाक्रमलाई खोजेर, कथाका पात्रहरूको दैलोमा टेकेर, उनका घरगोठ खेतीपातीलाई नियालेर कथालाई पस्केको भान हुन्छ । उमेरमा स्याल पनि घोर्ले हुन्छ (पृष्ठ३७), कुनैपनि गाउँ समाज मतभेद र झगडाको केन्द्र पनि हो, साथै सामाजिक न्याय र विकासको मञ्च पनि हो (पृष्ठ ३९), कालको कार्यालय त कहिल्यै बिदा लिइँदैन, छुट्टी मनाउँदैन र भोको पनि बस्दैन (पृष्ठ ७०),इन्द्रीय भोकबाट बञ्चित गर्न सकिदो रहेनछ (पृष्ठ ७६),रिठ्ठो नबिराई भन्छु (पृष्ठ ८६), होचाकी जोई सबैकी भाउजू (पृष्ठ ८९) यस्ता विविध खाले शब्द चयन, विविध दार्शनिक अभिव्यक्ति, जीवन दर्शनका विविध घटनाक्रमका शब्दावलीको प्रयोगले उनका भाषाशैलीको झलक दिन्छ । भूमिकामा ज्ञानु अधिकारीले लेख्नुहुन्छ–‘सरल र प्रवाहमय भाषका साथै कौतुहल जगाउने कथानकको प्रस्तुतिले कथा रोचक बनेका छन् । शैली शिल्पको दृष्टिलेभन्दा पनि विषयबस्तुको चयनका दृष्टिले कथा प्रभावी बनेको देखिन्छ । ’ज्ञानुजीका यी कथनलाई मैले पनि आत्मसात् गरेको छु ।
कथाकार राममणि पोखरेका कथाको कथासार, कथाले दिन खोजेको सन्देशलाई मैले हरेक कथामा छोटो सङ्केत दिन्दै आएको छु । कथाकारले कथाको थालनी तथा पृष्ठभूमिमा प्राकृति चित्रणलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएका छन् । गा्रमिण समाजको यथार्थतालाई समाएका छन् । कथामा काल्पनिकताभन्दा सत्यताको कडीमा उभिएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा उनका कथामा सामन्ती परम्परा माथिको प्रहार,विपन्न माथि भएको थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार, वेभिचार,यौनको शोषण र यौनको आवश्यक्ता, नारीवादी चिन्तन, विकृति विसङ्गतिको साथै जीवन दर्शन, आदि विविधताका विवरणहरू आएका छन् । त्यसैले राममणिका कथा सवल र अवल छन् । पठन योग्य र ग्रहण योग्य छन् । समय परिवर्तनशील छ । विकासक्रमले तीब्रता लिदै जान्छ । समाजमा पनि परिवर्तन आउँदै जान्छ । त्यसो हुँदा उनका कतिपय कथा आजको सन्दर्भमा इतिहासका दस्तावेज बन्न गएका छन् भने कतिपय कथाले समसामयिक युगको प्रतिनिधित्व पनि गरेका छन् ।
अन्त्यमा सफल एव म अवल कथाकार राममणि पोखरेलको सुस्वास्थ, दीर्घायुको साथसाथै नजिकदै गएको २०७६को विजया दशमीको आज षष्ठी तिथिको सुभ अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभ कामना सहित बिदा चाहन्छु ।
मिति २०७६ साल असौज १७ गते,
कावासोती न.पा. वाडा नं. ७,
गण्डकी प्रदेश, नवलपुर,